“Isbar-bardhiga xiddigaha Messi iyo Sterling waa mid xad dhaaf ah” – Busquets – Gool FM
(Spain) 15 Sebt 2019. Xiddiga khadka dhexe kooxda Barcelona ee Sergio Busquets ayaa sheegay in isbar-bar dhigga u dhaxeeya xiddiga Manchester City Raheem Sterling iyo kabtanka Barcelona ee Lionel Messi ay tahay mid la buun-buuniyey ee xad ka bax ah, isla markaana aysan u fiicneyn xiddiga reer England.
Raheem Sterling ayaa qaab ciyaareed fiican ku jira marka loo fiiriyo kulamada uu kaga soo muuqday kooxdiisa Manchester City iyo xulkiisa qaranka England, taasoo ka dhigtay in halyeeyga Liverpool ee Jamie Carragher uu sheegay inuu buuxin doono booska ay ka bixi doonaan xiddigaha Messi iyo Ronaldo.
Laakiin Sergio Busquets ayaa diiday isbar-bardhiga lala sameynayo Raheem Sterling kabtanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi, wuxuuna tilmaamay in gabi ahaanba arrintan aysan u fiicneyn laacibka reer England.
Wargeyska “Mirror” ee dalka England ayaa wuxuu soo xigtay wareysi uu bixiyay Sergio Busquets, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Raheem Sterling waa ciyaaryahan weyn, wuxuu leeyahay awood ciyaareed ee aad u weyn, laakiin isbar-bardhiga isaga iyo Lionel Messi waa buunbuunin, mana ahan wax u wanaagsan ciyaaryahanka”.
“Waxa saxda ah ee arintaan laga leeyahay ayaa ah in qof walba door weyn uu ka ciyaaro kooxdiisa, Sterling sida aan soo sheegay, waa ciyaaryahan weyn oo saameyn fiican ku yeelan kara waxqabadka xulka England”.
Si kastaba ha noqotee, Raheem Sterling ayaa dhaliyay 17 gool, sidoo kale wuxuu caawiyay 10 kale, kulamadii uu kooxdiisa Manchester City xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay, halka xilli ciyaareedkana uu dhaliyay 5 gool.